Dowlada oo sheegtay inay dileen Madaxii howlgalada Shabaab ee gobolka S/dhexe – Radio Damal
Dowlada oo sheegtay inay dileen Madaxii howlgalada Shabaab ee gobolka S/dhexe
Ciidamada dowlada ayaa sheegtay in howlgal ay sameeyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee DANAB ay ku dileen madaxii howgalada Alshabaab ee gobolka Sh/dhexe iyo konton ka mid ah dagaalamayaasha Alshabaab.
Sarkaal u hadlay ciidamada DANAB ayaa sheegay in uu ku dhintey howlgalkan Ismaaciil Fiidow oo madax ka ahaa howlgalada ay Alshabaab ka fuliso gobolka Sh/dhexe.
“Sarkaalkaan ka tirsanaa Al-Shabaab ee lagu magacaabo Ismaaciil Fiidow & ilaaladiisa waxaa lagu aasay Tuulada Buulo Yareey Shiiqaal oo katirsan Gobolka Shabeelaha Dhexe.:”ayuu yiri sarkaalkan ka tirsan DANAB.
Al-Shabaab kama aysan hadlin sheegashada hoggaanka Ciidanka DANAB ee ah in ay dileen madaxii howlgalada u qaabilsanaa Gobolka Shabeelaha Dhexe iyo xubno kale oo la socday oo qaarkood ilaalo u ahayd.
Iskahorimaad hubeysan oo ku dhex maray ciidamada dowlada iyo dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab oo ka dhacay deegaanka Buulalow ayaa lagu diley illaa 17 askari oo ka mid ah ciidamada dowlada iyo sarkaalkii hoggaaminayay.
Ururka Alshabaab ayaa sheegtay in iskahorimaadkaas ay ku dileen illaa 25 askari balse ma aysan shaacin tirada ka dhimatay.